Izindaba - Zikufundise ukuthi ungasusa kanjani i-nail gel polish ezinzipho zakho ngokwesayensi ekhaya ~
Fundisa ukuthi ungasusa kanjani i-nail gel polish ezinzipho zakho ngokwesayensi ekhaya ~
Ngisakhumbula ngibona abantu abaningi bekhononda ngonyaka omusha ekuqaleni konyaka omusha. Ngenxa yeCovid-19, bengingalindelanga ukuthi ngemuva kweqoqo lamaphijama, izinwele zokugcoba nezinwele ezazihlelelwe unyaka omusha konke kwaba yize.
Ngaleso sikhathi, uZ waduduza wonke umuntu inqobo nje uma besesimeni esihle, imali yayingachithwa. Kepha ngemuva kokudlula kwenyanga, kuvele inkinga entsha: izinzipho zikhule cishe ingxenye eyodwa kwezintathu, futhi izipikili ziyaxaka uma zihlala kuzo, nezindawo zezipikili azivuliwe. Yini engingayenzela i-nail nge-nail gel polish eyenziwe?
Izintokazi ezivame ukuthanda ukwenza ubuciko be-nail zazi ukuthi i-nail gel polish ihlukile kune-nail polish ejwayelekile. Uma uya esitolo ukuyisusa, kufanele upholishwe ngokucophelela yi-manicurist ukuyisusa. Lokhu kungenxa yokuthi ingaphezulu lesipikili line-sealant, elibhekele isipikili. Uthisha uze agqoke imiphetho yezipikili nge-sealant ukuzigcina zinde.
Imvamisa asinayo imishini yokuchwechwa ekhaya, kepha iphepha elijwayelekile le-sanding liyatholakala. Kunconywa ukuthi ukhethe umucu wokuzihlikihla onekhono eliqinile lokuqandisa ukupholisha ngokucophelela. Isikhathi sokupholisha siyahlukahluka. Okuhlangenwe nakho kukaZ ukuthi inqobo nje uma indawo ingakhanyi, icishe ifane.
Kuthiwani uma kungekho phepha le-matte ekhaya? Uyabona ukuthi izigaxa eziningi zezipikili zinezingqimba zazo zokupholisha, kodwa uhlobo lincane kakhulu, futhi ayikho induku ekhethekile yokuhlikihla izipikili ukuze isebenze kalula
Bese uqala inqubo esemthethweni yokususa izipikili. I-UV gel polish ayifani ne-nail polish ejwayelekile. Kungcono ukuthenga okokususa izipikili noma ikhithi ye-nail polish. Manje akulula ukuphuma uyothenga, ama-fairies akwenza nje ku-inthanethi.
Isipikili singathululelwa enkomishini encane, bese ucwilisa iminwe yakho imizuzu eyi-8-10 bese uyikhipha; ukusebenza kwesikhwama sezipikili kulula kakhulu, vula nje bese ugoqa iminwe eyishumi, imvamisa imizuzu eyi-15.
Ngemuva "kokubhabhadiswa" kwe-nail polish remover, i-gel polish iba ntofontofo. Ngalesi sikhathi, phusha kahle onqenqemeni futhi luzonyuka, bese ulusunduza kancane uye ekugcineni nge-pusher yensimbi, bese i-nail glue izosuswa ngempumelelo.
Uma kusekhona izinsalela, sebenzisa umucu wokuhlikihla esihlabathini esincane. Ekugcineni, ungakhohlwa ukupholisha nokufaka uwoyela wezakhi. Ukucwebezela kwesipikili esiphelele esisanda kususwa akukuhle futhi kuyabuthaka kancane, futhi kuzolulama kancane ezinsukwini ezimbalwa.
Kepha empeleni, ukuzipholisha izinzipho ngokwakho kulula kakhulu ukulimala, ngakho-ke uZ uzizwa ukuthi uma wenza umbala owodwa noma izinzipho zokweqa umbala (hhayi uhlobo olunamaphethini amaningi ayinkimbinkimbi), ama-fairies ane-nail polish ekhaya futhi bangakha imibala uqobo.
Thola inombolo yombala we-nail polish efana nombala we-nail, bese ufaka izingqimba ezimbalwa ngaphezulu engxenyeni esikhulile, bese ufaka i-nail polish ekhanyayo kuyo yonke indawo yezipikili. Umphumela kufanele ube muhle.
Kodwa-ke, yize okungenhla kulula futhi kulula ukusho, ukusebenza kwangempela kungahle kungafani nokuya endaweni yokucwala izinzipho, ngakho-ke kunenye indlela yokusika izinzipho ezikhulile.
I-Lazy Cancer Z yenze izipikili ezibomvu ezinamachashaza amnyama phakathi nonyaka omusha waseChina. Nginomuzwa wokuthi ngisayibona ngemuva kokusika ingxenye yesithathu. Ngicabanga ukuthi angikwazi ukuphuma manje, ngakho ngiyakhula futhi ngisike kancane. Kubonakala sengathi akunandaba?
Sekukonke, noma ngabe ama-fairies awethula mathupha noma ahlela ukuwagcina enje, qaphela ukuthi ungakhethi i-nail glue! Ekuqaleni, ukususwa kwezipikili ngokwesayensi akubangeli monakalo omkhulu kuzipikili, kepha uma uphoqa ukuthi kube lula, kulula ukulimaza umbhede wezipikili noma ngisho nokuvuvukala.
Futhi uma kungumuthi olula ofana no-Z ngalesi sikhathi, futhi akunandaba ukuthi uwugcina isikhathi eside, kusanconywa ukuthi ama-fairies agcine umkhuba omuhle wokucheba njalo ukugwema ukuqongelela ukungcola kuzipikili, okungakulungele umzimba ~
Iyaphela Gel Polish